Raysulwasaaraha Soomaaliya oo gaaray Switzerland si uu uga qeybgalo shirka Madasha Dhaqaalaha Adduunka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaRaysulwasaaraha Soomaaliya oo gaaray Switzerland si uu uga qeybgalo shirka Madasha Dhaqaalaha Adduunka
Raysulwasaaraha Soomaaliya oo gaaray Switzerland si uu uga qeybgalo shirka Madasha Dhaqaalaha Adduunka
January 23, 2018 Puntland Mirror Somalia 0
Raysulwasaaraha Soomaaliya iyo wefdigiisa oo wakiilka Soomaaliya u fadhiya Geneva, Switzerland, Faadumo Cabdullaahi Maxamed soo dhaweynayso. [Xigashada Sawirka: Twitter/Somalipm]
Davos-(Puntland Mirror) Raysulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta oo Talaado ah gaaray magaalada Davos ee dalka Switzerland si uu uga qeybgalo shirka Madasha Dhaqaalaha Adduunka ee WEF.
“Aniga iyo wefti aan hoggaaminayo ayaa gaarnay Davos, Switzerland si aan uga qeyb galno Shirka Madasha Dhaqaalaha adduunka. Shirkan oo ah markii ugu horreysay ee Soomaaliya ka qeyb gasho ayaan ku rajo weynahay inuu jid cusub u furi doono koboca dhaqaalaha dalka.” Ayuu ku yiri boggiisa Twitter-ka.
Raysulwasaaraha ayaa waxaa weheliya xubno katirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo ay kamidyihiin wasiiro.
Shirka Madasha Dhaqaalaha Adduunka ee WEF ayaa maanta oo Taladoo ah ka furmi doona dalka Switzerland. Waana markii ugu horeysay ee ay Soomaaliya ka qeybgasho sida uu sheegay Xasan Cali Khayre.
August 23, 2017 Kooxdii ugu horeysay oo ciidamo Turkiga ka socda ah oo yimid Soomaaliya
March 1, 2017 Baarlamaanka cusub ee Soomaaliya oo kalafadhigoodii 1-aad ku yeelan doona Muqdisho
Diyaarado dagaal oo aan la aqoon cida leh oo lagu arkay iyaga oo dul marayay deegaanada u dhow Garoowe
Garoowe-(Puntland Mirror) Diyaarado dagaal oo aan la aqoon cida leh ayaa alagu arkay iyaga oo dul marayay deegaanada u dhow caasimada Puntland ee Garoowe, sida uu sheegay goobjooge. Qof goobjooge ah ayaa warsidaha Puntland Mirror [...]